टिकटकमा नयाँ फिचर, अब किशोर किशोरीहरुको निन्द्रा मज्जाले पुग्छ – PathivaraOnline
Home > मनोरञ्जन > टिकटकमा नयाँ फिचर, अब किशोर किशोरीहरुको निन्द्रा मज्जाले पुग्छ
Poonam August 16, 2021 मनोरञ्जन 0
एजेन्सी । अहिले सबैभन्दा बढी डाउनलोड हुने एपमा टिकटक पुगेको छ । खासगरी युवामा बढी लोकप्रिय टिकटकले आफ्नो फिचरमा धेरै परिवर्तन ल्याएको छ । सामाजिक सञ्जालको अत्याधिक प्रयोगका कारण किशोर किशोरी बढी प्रभावित भएको र त्यसले नकारात्मक असर गरेको गुनासो आइरहेका बेला किशोरावस्ताकाहरुको लागि लक्षित केही फिचर टिकटकले परिवर्तन गरेको हो ।
एक नयाँ फिचर अनुसार अब १३ देखि १५ वर्ष उमेर समूहका टिकटक प्रयोगकर्ताले रातको ९ बजेपछि अर्को बिहानसम्म टिकटकमा पुस नोटिफिकेसन प्राप्त गर्ने छैनन् । जसका कारण अबेर राती सम्म टिकटक चलाएर बस्ने किशारावस्ताकाहरुले अब टिकटक चलाउन पाउने छैनन् ।
त्यस्तै १६ देखि १७ वर्षसम्मका प्रयोगकर्ताले रातको १० बजेदेखि अर्को बिहानसम्म टिकटकमा पुस नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नेछैनन् । यसले किशोरावस्थाका प्रयोगकर्तालाई रातको समयमा पनि टिकटकमा झुण्डिरहनबाट रोक्ने टिकटकले अपेक्षा गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा धेरै भुल्ने किशोरावस्ताकाहरुको अध्ययन, आराम तथा निद्रामा असर गरिरहेको तर्फ ध्यान केन्द्रित गर्दै टिकटकले यस्तो फिचर ल्याउन लागेको हो । साथै टिकटकले आफ्नो डिफल्ट सेटिङमा पनि परिवर्तन गरेको छ । जस अनुसार १६ र १७ वर्षका प्रयोगकर्ताका लागि डाइरेक्ट मेसेज फिचर डिफल्ट रुपमा निस्क्रिय बनाइरहेको हुन्छ । यदि सो उमेर समूहका प्रयोगकर्ताले डाइरेक्ट मेसेज फिचर पनि चलाउन चाहेमा आफैले उक्त फिचर अन गर्नुपर्दछ ।
कम उमेरका प्रयोगकर्ताहरुमा सकारात्मक डिजिटल व्यवहारको विकास गर्न चाहेको टिकटकले जनाएको छ । अब १६ वर्षभन्दा मुनिका प्रयोगकर्ताले टिकटकमा भिडियो पोस्ट गर्न लाग्दा उनीहरुको भिडियो कस कसलाई देखाउने भन्ने कुराको छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा आफ्ना फलोअर्स, केवल साथीहरु मात्र तथा आफैंले मात्र भन्ने विकल्प हुन्छ ।
अरबाैंकाे सुनले भरिएको उल्का पृथ्वीमा खस्दै…
अफगानिस्तानमा ३५ नेपालीलाई यसरी बनाइयो बन्धक,के भन्छ दुतावास?
ज्याकलिन फर्नान्डिजसंग हलिउड फिल्म खेल्दै नेपालकि यी तेस्रोलिंगी मोडल अञ्जली!
प्रकाश सुवेदी फेरी विवादमा, विवाहित दुर्गेशको प्रेममा किन परिन् गरिमा ? भन्दै यस्तो कार्यक्रम बनाएपछि (भिडियो हेर्नुस्)